လုလင်မောင် (ဝဲလောင်): နေလင်းအောင် သိုင်းဝတ္တုများ
ဆရာတက္ကသိုလ် နေလင်းအောင်ရဲ့ သိုင်းဝတ္တုစာအုပ်တွေကို စုစည်းပြီးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ သိုင်းဝတ္တုဝါသနာပါတဲ့ အစ်ကို ၊ အစ်မတွေ အတွက် အောက်မှာကြိုက်တဲ့စာအုပ်ကို ကလစ်ပြီးဖတ်ပေးကြ
ပါ။ အားလုံးပဲ ပျော်ရွင်ကြပါစေ.....ဗျာ။
(၂) ပျောက်ဆုံးနေသော ဝူရှန့်သိုင်း
(၃) သိုင်းကျမ်းရမက် သွေးနဲ့ဆက်
(၄) အငြိုးကြီးမား မီးနဂါး
(၄) အဆိပ်ဓါးပိုင်ရှင် ရှာပုံတော်
(၅) အထီးကျန်၏ လွမ်းစံအိမ်
(၆) ကျားကုတ် ကျားခဲ ယှဉ်ပြိုင်နွဲ
(၇) ပိုင်ယွင်ဆန်း ဓါးသမား
(၈) ဧကရာဇ်သခင်နှင့် သွေးယဇ်ပလ္လင်
(၉) ကံကြမ္မာကြွေး ရက်မရွေး
(၁၀) နဂါးနိုင် ဓါး
(၁၁) သိုင်းလောက၏ စိန်ခေါ်သံ (၁၄ အုပ်တွဲပေါင်းချုပ်)
အောက်ကစာအုပ်တွေကတော့ ဒေါင့်လော့ချပြီးဖတ်မှ ရပါလိမ်မယ်ဗျာ....
(၁၂) ပတ္တမြားနောက် ခြေရာကောက်
(၁၅) အမုန်းတရား၏ သမီးတော်
(၁၆) သိုင်းလောကအငြိုးခံ မိုးပျံမြေခွေး
(၁၇) သိုင်းတုံပွင့်လျှံ ပလွေသံ
(၁၈) သရဖူငြင်းသော သိုင်းဧကရာဇ်
(၁၉) လျှပ်တပြက် လုရှောင်ဖုန်း
(၂၀) ဓါးဘုရင်၏ အတ္ထုပ္ပတ္တိ
(၂၁) ဓါးတရာ ကြွေပန်းချီ
(၁၆.၉.၂၀၁၂) ရက်နေ့ ထပ်ဖြည့်တင်ပေးထားသော စာအုပ်များ
(၂၃) ချစ်ကြိုးယှက်လိမ် သွေးမီးအိမ်
အပိုင်း (၅) (ဇာတ်သိမ်း)
(၂.၈.၂၀၁၃) တွင်အသစ်ထပ်ဖြည့်တင်ပေးထားသော စာအုပ်များ
( ၂၅) ရန်နှိပ်ဓါး
Posted by လုလင် မောင်
Anonymous 22 November 2012 at 12:32
what about novels like "mahar yan thu" "mar kyin hu and paing yuan phae"?
Anonymous 21 January 2013 at 13:06
aye say 21 January 2013 at 23:37
Anonymous 12 February 2014 at 02:06
Hlaing Phyo 22 February 2013 at 02:02
အကိုရေ သိုင်လောကရဲ့ဥသျောင် နှင့် အဆက်(နာမည်မေ့နေလို) စာအုပ်များရှိရင်တင်ပေးပါ thz...
htun minthet 19 June 2013 at 16:46
မဏ္ဍိုင်ရောင်ညီး သိုင်းလောင်မီးလား မသိ
Hlaing Phyo 10 July 2013 at 22:24
tin min 12 March 2013 at 19:45
နေလင်းအောင် ၏ ယက္ခသုံဖော်နှင့်ဂူသုံးဂူ စာအုပ်တင်ပေးပါ ကောင်းလဝန်းလို့ပါ
Ye K Oo6April 2013 at 21:18
I cannot download the books. The links lead to mediafire and it insists on downloading it. How can I download the link.
Ye K Oo6April 2013 at 21:19
lin win 25 May 2013 at 15:24
ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျား အကိုရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ပါစေ ..
ရန်နှိမ်ဓား တင်ပေးစေ ချင်ပါတယ်...
နဂါးနိုင် ဓါး ကို အဆုံးထိ တင်ပေးစေ ချင်ပါတယ်...
Aung Thura 20 June 2014 at 03:26
https://www.dropbox.com/s/8802k3k36atao56/%E1%80%94%E1%80%82%E1%80%AB%E1%80%B8%E1%82%8F%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%B9%E2%80%8C%E1%80%93%E1%80%AB%E1%80%B8.pdf ဒါ နဂါးနိုင်ဓား စာအုပါဒေါင်းဖို့ link ပါ
Aung Thura 20 June 2014 at 03:29
ဆူးကျားသစ် ဆိုတဲ့သိုင်းစာအုပ်ရှိရင် တင်ပေးပါလားဗျို့....
htun minthet 19 June 2013 at 16:50
ကျေးဇူးကြီးလှပါသော အစ်ကို လုလင်မောင် ခင်ဗျာ.. အခုလို ပြည်ပရောက်ပြီး မြန်မာ့ နာမည်ကျော်ဆရာနေလင်းအောင် ရဲ့ ၀တ္တုတွေ ကို ဖတ်ရှုခွင့်ရလို့ အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းပါ..။
တစ်ခြားသော သိုင်းဝတ္တု စာရေးဆရာများရဲ့ စာအုပ်တွေ ဖတ်နိုင်မယ့် website တွေရှိရင်လဲ တင်ပေးပါနော်...။ စာရေးဆရာနာမည်တော့မေ့နေလို့ ( ပန်းစင်္ကြာဓါးသမား ) ဆိုတဲ့ စာအုပ်လေး အရမ်းဖတ်ချင်လို့ ရှိရင်တင်ပေးပါလို့ တောင်းဆိုပါတယ်..။
htun minthet 19 June 2013 at 17:07
ဆောရီးနော် သေချာ မရှာခင် ဆန္ဒစော သွားလို့ ..။ ကျွန်တော်ဖတ်ချင်တဲ့ စာအုပ်ရှာတွေ့ပါပြီး... မပြောပြတတ်အောင်ကို ကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းပါ အစ်ကို...။
de dee9August 2013 at 19:49
ပီတာ 23 August 2013 at 13:58
အကိုနေလင်း နန်စဉ်ရတနာနငိ့မျိုးဆက်သွေး လားမသိဘူး ရှိရင်တင်ပေးစေခြင်ဘာတယ် ကျွန်တော်
Anonymous 27 August 2013 at 17:42
ပြန်လမ်းမဲ့ကျွန်းဆိုတဲ့စာအုပ်ရှိလားဗျို့ :D ရှိရင် မျှအုံးနော်
Anonymous 30 August 2013 at 03:06
Anonymous 19 September 2013 at 20:13
၀င်းကြွယ်ရဲ့ နှင်းငွေ့မိစ္ဆာ ရှိရင် တင်ပေးပါခင်ဗျာ
zinmaung maungphyo3January 2014 at 11:59
နေလင်းအောင် စာအုပ် ရှိသမျှ အကုန်တင်ပေးပါနော် သူ့ စာအုပ် မှန်သမျှ အားလုံးဖက်တယ်
Anonymous 11 January 2014 at 15:26
နေလင်းအောင်ရဲ့ အလင်းရောင်ပမာသိုင်းဦးသျှောင် ဆိုတဲ့စာအုပ်တင်ပေးပါဦး
Nyi Nyi Aung 19 January 2014 at 14:56
zinmaung maungphyo 23 February 2014 at 12:27
သိန်းငှက်သူရဲကောင် (၁) က မက်မွန်ကျွန်းက တေးတပုဒ် လေ အဲ့စာအုပ်က ဝင့်ကြွယ် ရဲ့ ကိုးသင်္ချိုင်း ကစိန်ခေါ်သံ လေ ဒုတိယ အတွဲကတော့ ခုထိ ရှာမတွေမိဘူး ဗျာ
zinmaung maungphyo 23 February 2014 at 12:28
Anonymous 1 March 2014 at 22:48
သေရွာပြန်၏အလွမ်းကဗျာ ၂၄အုပ်တွဲလားမသိဘူး အဲ့စာအုပ်လေးတွေ့ရင်တင်ပေးပါလား..
Logo Of Satan 31 August 2016 at 11:02
zinmaung maungphyo 24 March 2014 at 11:21
အပေါ်ဆုံးက စာာအုပ်တွေကို ဒေါင်းလော့ လို့ချင်ပါတယ်
linlin 28 April 2014 at 16:41
ထွက်လို့ ခဲ့ ဖူးတယ်
ကြာပြီဖြစ်လို့့သိပ်မမှတ်မိတော့့ဘူး
boy lay9July 2014 at 15:03
kokogyi 13 July 2014 at 10:42
သိုင်းလောကစိန်ခေါ်သံ pdf ကနောက်ပိုင်းတွေဖတ်လို့မရဘူးအစ်ကိုရေ
Eiei Aries 14 July 2014 at 01:13
Anonymous 21 July 2014 at 17:39
Krystal James 1 October 2014 at 09:21
​နေလင်း​အောင်​ စာအုပ်​ ဇာတ်​လမ်း အရှည်​တွဲ​တွေ ရှိ​သေးရင်​ ထပ်​တင်​​ပေး​စေချင်​ပါတယ်​
Chit Thway Ko 14 August 2015 at 06:43
Chit Thway Ko 14 August 2015 at 06:45
Aster 17 October 2015 at 15:02
ရပါတယ် Link တွေမသေသေးဘူး တော်သေးတယ်
yain lay 28 February 2016 at 15:50
သိုင်း​လောကမကိုဋ်​ဦး​သျှောင်​ နဲ့ ​နောက်​ဆက်​တွဲ​လေးတင်​​ပေးပါလား ဒီမှာရှာမရလို့ပါ
အဆင်ပြေလို့ Comment မပေးချင်နေပါ..Link သေနေတာတွေ့ရင်တော့ Comment ပေးခဲ့ပါဗျာ...
အောက်မှာ Mail ထည့်ပါ
Delivered by လုလင်မောင်
အသစ်တင်တိုင်း Mail ပို့ပေးပါမယ်
ကြိုက်ရင် LIKE ခဲ့ပါ...
VZO ၊ SKYPE ကိုတစ်ခုမက ဖွင့်ရအောင်
Proxyswitch Standard 3.9.0
G-talk ကိုတစ်ခုမက ဖွင့်ရအောင်
AV MP3 Converter
Ashampoo slideshow studio HD2.0.4
Photomatix Pro V3.2.7
Virtual DJ Trial V6.0.7 Professional
SWF FLV to MP3 Converter 2.7
Ashampoo Music Studio3
XiLiSoft Video Converter Ultimate V6.5.5
Bigasoft Iphone Ringtone Marker
Easy Audio Converter V3.70
Cat & Honey
Phzilla Proxy Add-On
... အိပ်မက်ကြမ်း ...
တက္ကသိုလ် ဝင်းကြွယ် သိုင်းဝတ္တုစာအုပ်များ
Tor Proxy Net Toobar
ဆော့(ဖ်)ဝဲများ (205) ဝတ္တုစာအုပ် (45) နည်းပညာ စာအုပ်များ (21) နည်းပညာ (15) Themes (10) ကဗျာ (8) ကာတွန်းစာအုပ် (7) ScreenSaver (6) အထွေထွေ (3) Game (1)